सुशान्तको बारेमा पहिलोपटक बोले अक्षय कुमार, हेरौँ के भने? (भिडियो) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/सुशान्तको बारेमा पहिलोपटक बोले अक्षय कुमार, हेरौँ के भने? (भिडियो)
सुशान्तको बारेमा पहिलोपटक बोले अक्षय कुमार, हेरौँ के भने? (भिडियो)
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको नि’धन भएको ३ महिना बितिसक्दा पनि उनको मृ’त्युको कारण खुल्न सकेको छैन। देशका ठूला एजेन्सीहरू सुशान्तको मृ’त्युको र’हस्य सु’ल्झाउन लागिपरेका छन् तर ठोस कारण अझैसम्म पनि रहस्यको गर्भभित्रै छ। केसमा ड्र’ग्स मा’मिला जोडिएपछि आ’रोपी रिया चक्रवर्तीलाई नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो (एनसिबी)ले हि’रासतमा राखेको छ। बलिउडमा हुने ड्र’ग्स ले’नदेन र प्रयोगको छा’नबिनमा एनसिबीले यतिबेला आफ्नो ध्या’नाकर्षण गरेको छ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
सुशान्तको मृ’त्युपछि बलिउडका धेरै स्टारहरूले प्रतिक्रिया जनाएका थिए। आफ्ना पोस्टहरूमार्फत् सुशान्तलाई याद गरेका थिए। तर यस मामिलामा अक्षय कुमार बोलेका थिएनन्। के’समा ड्र’ग्स प्र’करण जोडिँदासमेत उनी बोलेनन्। दर्शकहरूले उनको प्रतिक्रिया पर्खिरहे तर अक्षय मौन रहे। यसैकारण धेरै दर्शकहरू अक्षयसँग रुष्ट पनि भए। तर सुशान्तले संसार छाडेको ३ महिना बितिसकेपछि अक्षयले सुशान्त र बलिउडमा छा’एको ड्र’ग्सका बारेमा बोलेका छन्।
एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्दै अक्षयले सुशान्तलाई याद गरेका छन्। बलिउडले सुशान्तलाई गु’माएकोमा खे’द व्यक्त गरेका छन्। सुशान्तको अ’चानक मृ’त्युले सबैलाई दुख पु’र्याएको र उनको मृ’त्युले सोच्न बाध्य बनाएको बताएका छन्। ड्र’ग्स मा’मिलामा बोल्दै अक्षयले बलिउडमा ड्र’ग्स छ, छैन भन्न मि’ल्दैन तर सबैलाई एउटै नजरले हेर्न न’मिल्ने बताएका छन्। आफूहरूलाई दर्शकले ता’ली गा’ली जे दिए पनि स्वीकार गर्ने अक्षयले बताए। हेरौँ भिडियो
ब,ला,त्कार गरेर ह,त्या गरेको पुष्टि भयो हेटौडामा यो दिदिले भनेजस्तै भयो कति बर्ष जेल? (हेर्नुहोस भिडियो)